Nagu saabsan - Ewig (huizhou) technology Co., ltd
Baaskiil Buurta Kaarboon
Baaskiil Wadada Kaarboon
Baaskiil Isku Laabid Kaarboon
Kaarboon E Baaskiil
Tikniyoolajiyadda Ewig waxaa loo yiqiinay "SAVA team design design hal abuur leh", oo lagu aasaasay Sindelfingen Germany sanadkii 2005. Hadafkeennu wuxuu sameynayaa inta badan xirfadleeyda baaskiil kaarboon. Wax soo saarkayagu wuxuu ka kooban yahay baaskiilka wadada kaarboon, baaskiil buur, baaskiil koronto. Kadib sanado horumar ah, waxaan helnay iskaashi xoogan SHIMANO, MAXXIS, FIZIK, PROPALM, TORAY iwm.
Markaan ku taageerno qaybiyayaasheena suuqgeynta adduunka, waxaan ku yeelanay sumcad weyn xagga tayada iyo adeegga. waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad na soo booqato si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Xadiiqadda warshadaha Huaguo qiuchang twon
degaanka huiyang magaalada huizhou
Kaliya loogu talagalay fiilada kaarboon
Baaskiilada Ewig waxay ku saleysan yihiin kaarboon kaarbooneed, qalab tayo sare leh. Astaamaha lagu tartami karo ayaa badanaa ah baaskiilada buuraha kaarboonka, gawaarida wadada iyo baaskiilada isku laabma.
Race Show / Show Style
Maxay yihiin awooda carbon fiber a ...
Sidee loo sameeyaa baaskiilada kaarboon iyo sababta ...
Maxaa baaskiil looga dhisayaa kaarboon kaarboon | EWIG
Huaguo park park qiuchang twon huiyang aagga huizhou magaalada guangdong china
Hada Naga Soo wac: 0086-752-2153828
Tikniyoolajiyadda Ewig © Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.